Maqal: Ciidamo ka socda Dalka Sierra Leone oo Maanta Muqdisho gaaray – SBC
Maqal: Ciidamo ka socda Dalka Sierra Leone oo Maanta Muqdisho gaaray
Ciidamo ka badan 100 oo ka socda Dalka Sierra Leone kana mid ah Howlgalka Amisom ayaa maanta diyaaradii siday soo caga dhigatay magaalada Muqdisho caasimada dalka.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Amisom ayaa ku so dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cade Ciidankan 100 ka ah waxayna sheegeen mar ay saxaafada kula hadleen goobta in ay ciidamadan ka mid yihiin kuwa kujira Howlgalka amisom ee ay dowlada dalkaasi Sierra Leone ugu talagashay in ay u soo dirto dalka Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa la sheegay in ay saacadaha soo socda ugudbi doonana magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ee Jubaland halkaas oo ay ka howlgali doonaan inta ay joogaan dalka .
Dhageyso Warbixin Faah faahsan oo Uu wariye Maxamuud Cismaan Warsame Daacad RIIX AMA DHAGEYSO
Ciidamo kale oo intan ka badan islamarkaana ka soo deygay gobolada dhaca xadka Soomaaliya iyo kenya ee gobolka Jubada hoose ayaa iyaguna lagu wadaa in ay si toos ah u galaan magaalada Kismaayo si ay uga mid noqdaan ciidanka saacadaha soo socda tagaya Kismaayo.
Dowlada Dalka Sierra Leone ayaa hada ka hor u balanqaaday in ku dhowaad 850 askari ugaga qeyb qaadaneyso howlgalada ciidamada nabad ilaalinta Amisom ee ka soconaya dalkan Soomaaliya, waxayna ciidamadani qeyb ka yihiin balanqaadkaasi.